Lapita Dubai nwere ngwugwu njem nlegharị anya Parks & Resorts
Dubai Nọgide na -egwu egwu - Lapita Specialeze 212022-05-23T17:14:48+05:30
Abalị 04 nọrọ na Three Star Dubai Hotel gụnyere nri ụtụtụ.
01 abalị nọrọ na Lapita Dubai Parks and Resorts (04 Star) gụnyere nri ụtụtụ.
Interhotel na-ebufe site na Dubai Hotel gaa Lapita Dubai Parks and Resorts na ndabere nkeonwe.
Nweta ohere na-akparaghị ókè na ogige 01 ọ bụla na Dubai Parks & Resorts:
- Ogige mmiri LEGOLAND
Ọdụ ụgbọ elu ọpụpụ na-ebufe site na Lapita Dubai Parks na Resorts gaa ọdụ ụgbọ elu International Dubai na ndabere nkeonwe.
Nwee obi ụtọ nri ụtụtụ na nkwari akụ. Lelee ụlọ oriri na ọṅụṅụ Dubai ma nyefee na Lapita Dubai Parks and Resorts. Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị ga-erute na họtel n'oge maka ịnyefe interhotel. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Lapita bụ azịza maka ezumike ezinụlọ gị na Dubai. N'ebe ogige ntụrụndụ mara mma nke Dubai dị n'aka gị, ọ nweghị ebe ka mma ịkwapu akpa gị wee banye ozugbo na njem. Lapita bụ naanị ebe ntụrụndụ dị n'ime ogige ntụrụndụ na Dubai. 1 abalị nọrọ na Lapita Dubai Parks na Resorts yana ohere na-akparaghị ókè na ogige 01 ọ bụla.
MOTIONGATE ™ Dubai Ihe nlere anya kacha mma sitere na atọ n'ime ụlọ ihe nkiri eserese kachasị na nke na-aga nke ọma na Hollywood - DreamWorks Animation, Columbia Pictures na Lionsgate - mezue nleta gị na ụwa ihe ọhụrụ na ịkọ akụkọ okike site na ịga na ogige ntụrụndụ MOTIONGATE ™ Dubai.
LEGOLAND® Dubai wulite ụzọ gị site na ntụrụndụ na-adịghị akwụsị akwụsị na LEGOLAND® Dubai. N'ihe karịrị 40 LEGO® n'ụdị ịnya igwe, ihe ngosi, ahụmịhe ụlọ na ihe nkiri. Ọ bụ ụbọchị ezumike zuru oke maka ezinụlọ nwere ụmụaka dị afọ 2-12.
LEGOLAND® Water Park bụ ihe pụrụ iche dịka, naanị ogige mmiri dị na mpaghara a haziri maka ụmụaka gbara afọ 2-12 na ezinụlọ ha. N'ebe a na-egwu mmiri nke LEGO®, gaa na Joker Soaker, wuo ụgbọ mmiri LEGO® nke gị ma fegharịa n'osimiri umengwụ, gaa na safari ma ọ bụ tufuo ma gbadaa ala otu n'ime ọtụtụ ihe nkiri anyị. Site na ihe mmịfe mmiri 20 na ihe nkiri, ọ bụ ahụmịhe ezinụlọ dị egwu! Ogige ntụrụndụ.
Ụdị ime ụlọ: Queen Room / Deluxe King Room Resort View price
Ịkekọrịta Otu $ 659
Ịkekọrịta ugboro abụọ (ọnụego otu onye) $ 415
Ịkekọrịta ụmụaka na -enweghị akwa ọzọ Hapụghị
Aha ụlọ nkwari akụ: Hampton Site Hilton Dubai ma ọ bụ ihe yiri ya
Typedị :lọ: Ụlọ Queen
Aha ụlọ nkwari akụ: Ogige ntụrụndụ Lapita Dubai na ebe ntụrụndụ
Typedị :lọ: Deluxe King Room Resort View
Ogo ogo: Nọvemba 27, 2021 - Maachị 31, 2022